Gqoka ukumelana nekherami yomshini wekhofi womenzi wekhofi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > Gqoka ukumelana nekherami yomshini wekhofi womenzi wekhofi
I-Ceramic blade for coffee bean maker yenziwe ngamaphesenti angu-95 aluminium oxide. Inezici zayo ezingavamile, ezifana nokugqoka ukumelana, ukubiza izindleko eziphumelelayo kanye ne-eco-friendly futhi ezisezingeni eliphansi lokuziphatha ngokufudumele, kuye kwamukelwe kabanzi yibo abakhiqizi abaningi bekhofi grinder, ngezinye izikhathi lisetshenziselwa ukufaka esikhundleni sensimbi yokugaya i-flat flat.
Asikwazi kuphela ukunikeza ukucaciswa okujwayelekile, kodwa futhi nomkhuba okwenziwe ngosayizi ohlukile, umbala ohlukile, onjenge-black, gray, brown, ivory, njalonjalo. Njengeqembu lethu elihlangene nekhono lokukhiqiza, singakwazi ukufeza ama-chanllege amaningi amasha avela kumakhasimende ethu. Zonke izingcezu, wonke amaqoqo kufanele ahlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuthunyelwa.